I-AZEK VS TREX DECKING (I-PROS KUNYE NE-CONS KUNYE NESIKHOKELO SOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-Azek vs Trex Decking (i-Pros kunye ne-Cons kunye nesikhokelo soYilo)
Nantsi eyethu i-Azek vs Trex yokukhangela isikhokelo sokuyila kubandakanya i-pros kunye ne-cons, umahluko kwizixhobo zomgangatho, iindleko kunye nothelekiso lokukunceda ukhethe. I-Trex kunye ne-Azek ziimpawu eziphambili ekudibaniseni izinto ezikunika ubuhle bomthi ngelixa zigqwesa umlingane wendalo ngeendlela ezininzi.
Ukuhonjiswa ngokudibeneyo njengeTrx kunye neAzek kutshintshe indawo yokuhlala ngaphandle. Ngenxa yokuzinza kwazo okugqwesileyo, ukugcinwa ngokulula, uzinzo lolwakhiwo, kunye nokukwazi ukumelana nokubola, iidesika zomdibaniso zingqineke zikhuphisana ngendlela eyoyikekayo kwimiphanda yemithi ethandwayo yendalo. Kodwa phakathi kweempawu ezithandwayo, makufumanise ukuba loluphi ukhetho olufanelekileyo kuwe.
Yintoni iAzek vs Trex Decking Material?
I-Azek Decking Pros kunye ne-Cons
I-Trex Decking Pros kunye ne-Cons
I-Azek xa ithelekiswa nexabiso leTrx
I-Azek ngokuchasene neTranti yeTrx
I-Trex ngokuchasene neengxaki ze-Azek zokuHamba
Yeyiphi engcono i-Azek okanye i-Trex Deck?
I-Azek kunye ne-Trex Decking zizinto ezingezizo ezomthi ezifanisa ukubonakala komthi wendalo. Zombini zinika ubuhle obuhlala buhleli ngelixa zijolise ekulingiseni ukuziva kunye nokusebenza komthi ngaphandle kweengxaki zesiqhelo zezinto eziphilayo.
Umahluko ophambili phakathi kwe-Azek kunye ne-Trex decking licandelo lezinto nganye. Ngelixa i-Azek decking yenziwe ngokupheleleyo nge-PVC, iTrex yenziwa ngokudityaniswa kweetshipsi zeenkuni kunye neplastiki ehlaziyiweyo icinezelwe kunye kwaye ithathwa njengendawo yokuhombisa edityanisiweyo. Sidibanise inqaku ngokuthelekisa I-PVC vs ukuhonjiswa ngokudibeneyo Apha.
Zombini ezi zixhobo ziyathandwa, zithathwa njengamagama aphezulu eempawu xa kufikwa kwizinto zangaphandle zokuhombisa. I-Azek decking izinze eChicago, kwaye iTrex izinze eWinchester. Zombini zinezityalo ezininzi zokuvelisa kulo lonke elaseMelika.
Ngoku siza kugubungela ezinye zeenzuzo kunye neengozi ze-Azek vs Trex decking material eqala ngo-Azek.
Ukumelana noMngundo kunye nexoshomba . Amanzi sisizathu esinye sokubekwa komthi ukwehla, ngakumbi xa esetyenziswa kumadanyana. Iideki ze-Azek zenziwe ngokupheleleyo nge-PVC, ezenza ukuba zingangenwa ngamanzi, zithintele ukukhula kokungunda. Kodwa ngaphandle kwesondlo esifanelekileyo, isikhunta sinokukhula ngaphezulu kodwa soze singene kwiibhodi zomgangatho.
Izinambuzane zithanda iinkuni kodwa hayi izinto zePVC . Awunakuxhalaba malunga neenyosi zokuchwela, iintubi, okanye izinambuzane ezigawula imithi kwiibhodi zakho zomgangatho.
Ibambe iimeko zeMozulu eziGqithisileyo . Ngeyunifomu kunye nokuzilungisa okuzinzileyo, i-Azek decking yakho ayizukubopha okanye inciphe nangaphantsi kweemeko zemozulu ezibi kakhulu.
Ukumelana nokuchaphazeleka okumangalisayo . Ukuhonjiswa kwe-Azek kunendawo ehlala ihleli ethintela imijelo kunye nemikrwelo ekuboniseni ekuhonjisweni kwakho.
Ukuphela-Ukuxhathisa . Ngenxa yokunqongophala kwezinto eziphilayo, i-Azek decking iya kujongeka ilungile ukusuka kufakelo lwayo lokuqala ukuya kubomi bayo benkonzo. Ikwabonelela ngeminyaka engama-50 yokuphela kunye neWarrant Resistant Warranty.
Elula . Ukunqongophala kwezinto zomthi kwenza ukuphatha i-Azek kube lula. Oku kukwathetha ukuba ungasebenzisa ipakethe ye-PVC kwiindawo eziphakanyisiweyo ngaphandle kwesidingo sokukhathazeka malunga nobunzima bayo kwiziseko zakho.
Ayigobi . Ngokungafaniyo neenkuni zendalo, indalo eyohlobo olunye kunye nozinzo lwezinto zePVC zithetha ukuba ayizukuqhekeka, iyenze indawo ekhuselekileyo yokuhamba ngaphandle kweembadada, ngakumbi abantwana bakho kunye nezilwanyana zasekhaya.
Unokusetyenziswa kwakhona . Ngelixa kulula ukuyifaka, kulula kwakhona ukuyiqhekeza uphinde uyisebenzise kwenye indawo. Olu tshintsho lwenza ukuba i-Azek ihle kakhulu kubaqeshi kunye nokuhamba rhoqo.
Isondlo esisezantsi . Umphezulu awunantlonelo kakhulu kwiiarhente zokucoca. Umtshayelo othambileyo uya kwenza ubuqhetseba, emva koko umbane wombane ulahle inkunkuma ebanjiweyo. Ukufumana amabala anenkani, umphezulu kufuneka ucoceke kuphela ngezicoci ezivunyiweyo ngumenzi.
Uluhlu olubanzi lokukhetha . Omnye wemiceli mngeni kumgangatho wokhuni kukufumana umbala ofanelekileyo kunye nokuthungwa ukuze kutshatise ukhetho lwakho loyilo.
Ngezinto zokwenziwa, kukho uluhlu olubanzi loyilo onokuluxuba kunye nokudibanisa nembonakalo yakho oyifunayo yangaphandle, kwaye uya kufumana ngokulula inani elifanelekileyo labathengisi kwindawo yakho.
Banemibala eyahlukeneyo kunye neenkqubo zokuthuka ukwenza iinkangeleko ezahlukeneyo. Bona Okuninzi izimvo zomgangatho wokuthuka Apha.
I-Cortex iyahambelana . Ukuba unqwenela umphezulu ongenamthungo, ungasebenzisa iNkqubo yokuFihla efihlakeleyo yeCortex. Obu bume bomgangatho wedrafti buquka izikhonkwane zomgangatho, iiplagi zedesika, kunye nenkqubo yokuqhuba yeTORX ekhusela iibhodi zakho kwindawo engaphantsi ngaphandle kokubhengeza izinto zokubopha.
Umxholo weVOC . Iideki ze-Azek zenziwe ngeplastiki kunye nezinye iikhemikhali ezinokubakho kwi-gesi, ngakumbi xa iphantsi kobushushu obukhulu. Bamba iiglavu kunye nezixhobo zokhuseleko ngexesha lofakelo kwaye uhlambe izandla ngaphambi kokuphatha ukutya.
Indlu yebali eyi-4
Izinto ezinobungozi . Inkqubo yokumisa i-Azek ihlelwa njenge-GHS-US phantsi kweMigangatho yeengozi ze-OSHA oko kuthetha ukuba umxube awuthathwa njengoyingozi xa ulandela umkhombandlela onelebhile.
Nangona ukusika, ukusarha, ukusila okanye eminye imisebenzi evelisa uthuli inokucaphukisa ulusu, amehlo, kunye nendlela yokuphefumla. Kungcono ukufuna ingcali ngexesha lofakelo.
Ukufunxa ubushushu ngokukhawuleza . Zombini i-Azek kunye ne-Trex ziya kushushu ngokukhawuleza phantsi kwelanga kodwa kuba i-Azek yenziwe ngezinto ze-PVC ke iya kushushu ngokukhawuleza kuneTrex. Icala elingezantsi koku kukuba i-Azek inokusasaza ubushushu ngokukhawuleza kube kanye phantsi komthunzi kunaleyo ye-Trex decking.
Ixabiso eliphezulu . Phakathi kwe-Azek kunye ne-Trex decking, i-Azek iphakathi kwe-20% ukuya kwi-30% ebiza kakhulu kuneTrx.
Ezinzileyo . I-Trex decks yenziwe ngezinto ezingama-95% eziphinda zenziwe kwakhona ezibandakanya ukubuyiswa kweetshipsi zeenkuni kunye neplanga leplastikhi. Oku kuthetha ukuba kuyindlela ezinzileyo kumthi wendalo.
Ukujonga okuhlala ixesha elide kunye nokuSebenza . Ukubunjwa kwezinto ezifanayo kugcina izinto ziqinile, zigcina ekuqhekekeni, ekuboleni, okanye ekuqhekekeni zibe ziingceba, ezenza ukuba zibe notyalo mali olufanelekileyo.
Isondlo esisezantsi . Ngokungafaniyo neenkuni zendalo, isanding, ibala, okanye ukupeyinta akufuneki kugcinwe ukubonakala kunye nokuthembeka kwesakhiwo seTrex decking yakho.
Iphela kunye neWarranty Warning . Ukuhanjiswa kwe-Trex kunikezela ngeminyaka engama-25 yokuFade kunye neStain Warranty. Oku kuqinisekisa ukuba awuyi kuba neengxaki zokubala okanye ukutshabalalisa nangona uphantsi kwelanga.
Ujongeka kwaye uziva ngathi ngumthi . I-Trex ngokuthelekiswa nokubonakala kuka-Azek kwaye ivakalelwa njengemithi yokwenyani ngenxa yento ebunjiweyo kunye nomxholo wokhuphinda owenziwe ngokutsha.
Ukukhusela ukuxhathisa . I-Trex iphumelela i-Azek xa kufikwa kumba wokumelana nokubamba iqokobhe elilukhuni elinokumelana nokukrwela, kwaye limelane nokuvezwa kwexesha elide kwimozulu embi.
Umphezulu obutofotofo . Njengoko inezinto ezenziwe ngomthi, indawo yokuhlala iTrx iya kuziva ikhululekile ukuhamba ngeenyawo ezingenanto, kwaye ngokulingana nangokuzinzileyo, uya kuziva uqinile kodwa uthambile ngokuchasene nomgangatho wakho womgangatho, njengokuhamba kumthi wendalo.
Isebenza kakuhle emalini . Ukuhonjiswa kwe-Trex kunokuba yindleko ephezulu ngaphambili, kodwa kuyakusindisa ngakumbi ekuhambeni kwexesha ngobuhle bayo obuhlala buhleli. Kuyonwatyelwa ngaphandle kwesidingo sokuphinda ubonwe. Ukutshintshwa kuncitshisiwe kuba kunokuhlala kangangeminyaka engama-25 ukuya kwengama-50 okoko ukufakelwa kwenziwe ngokuchanekileyo. Ewe, umphezulu kufuneka ucocwe rhoqo ngokutshayela kunye nokutshiza okulula.
Ipetroli . Kuba yenziwe nge-95% eyenziwe ngomthi, inokutsha, kodwa unokukhetha ukuba nebhodi yoKhuselo loMlilo iTrex enomgangatho ophezulu womlilo. Nangona kunjalo, iibhodi zoKhuselo loMlilo zeTrex zenziwe nge-50% yeenkuni kunye neepesenti ezingama-50 ze-polyurethane eziza kutsha kancinci kunamaplanga emveli.
Ayinakuhlanjwa ngoxinzelelo . Akucetyiswa ukuba ungacinezeli ukuhlamba i-Trex decking yakho kungonakalisa umhlaba okhangayo kunye nokushiya iwaranti. Unokucoca i-Trex decking yakho nge-mop mop emanzi kunye nokutshayela rhoqo ukunqanda ukungcola ukuba kuhlale ngaphezulu.
Umceli mngeni wokususa umkhenkce nekhephu . Ukuzinza kweTrex kuhlala ngexesha lemozulu embi kodwa kunokuba ngumceli mngeni ekususeni umkhenkce nakwikhephu kwiibhodi zomgangatho.
Ukwakha okungagungqiyo . Ngeemeko ezifanelekileyo, ngakumbi ukuba uhlala kwindawo eyomileyo, inokubangela ukothuka okuncinci xa uhamba ngaphezulu. Unokufaka iStaticide okanye ucoce umphezulu ngesisombululo esichaseneyo sokuthintela ezi jolti zingathandekiyo.
Ukutshekisha i-Azek kungabiza malunga ne- $ 17.50- $ 27.5 ngeenyawo zenyawo, ngelixa i-Trex ifikeleleka ngexabiso ukusuka kwi- $ 9 kuye kwi-16 yeedola.
Ukufumana inani elingcono le-ballpark fumana iikowuteshini zasimahla kwiikontraki ezimbini ezahlukeneyo.
Iwaranti yokusetyenziswa kwendawo yokuhlala i-Azek kunye ne-Trex inikezela ngeziqinisekiso ezinqongopheleyo kunye neemveliso zabo ezinemikhono egubungela iziphene zezinto ezibonakalayo, ukubola kunye nokusasazeka.
Uyakufumana ukhuselo lwesiqinisekiso esonyukayo esonyuka ngokufana, apho i-Azek decks Fade kunye ne-Stain waranti egubungela iminyaka engama-50 ngelixa iTrex igubungela zonke iimodeli zazo zigubungela ukuya kwiminyaka engama-25.
Zombini iimveliso zineenqwelomoya eziqinisekileyo apho ziya kuthi zitshintshe iibhodi ezonakalisiweyo okanye zikhuphe ukubuyiselwa kwemali kwinxalenye yemali kuxhomekeke kubunjani beziphene. Ungajonga naluphi na utshintsho oluhlaziyiweyo kwiiwaranti zabo kwiwebhusayithi yabo.
Iingxaki ngokudibanisa kuzo zombini i-Trex kunye ne-Azek decking iza ikakhulu ngokufakwa ngokukhawuleza kobushushu. Njengazo zonke izinto ezidityanisiweyo kunye nezinto zeplastiki, ukufudumeza okukhawulezayo kweebhodi zakho zomgangatho kunokuba yingxaki kuba uninzi lweekhonkco alufumani mthunzi ungako wokusetyenziswa kwangaphandle.
Kukho izisombululo zokunciphisa ubushushu kwiindawo zakho zokudibanisa apho kulula kakhulu ukubeka i-pergolas, i-awnings, okanye i-ambulera ze-patio ezinokunciphisa ukubonakaliswa kweeteksi zakho ekukhanyeni kwelanga. Ungaziphathisa iimpazamo zakho amaxesha ngamaxesha ngamanzi ukunciphisa ubushushu.
Ukuba uhlala kwindawo enelanga, unokukhetha enye into oza kuyisebenzisa, okanye ungafaka isicelo sokukhusela i-UV kunye nepeyinti ebonakalisa ubushushu kumgangatho wakho.
I-Timbertech yenye yezinto ezinqabileyo ezifana ne-Azek eyenziwe ngezinto ze-PVC. Ukufumana umxholo onxulumene nesi sihloko tyelela ukuthelekisa kwethu I-Timbertech vs Trex decking Apha.
U-Azek unesibane esimenyezelayo xa uthelekisa nembonakalo ye-Trex ethe kratya, kwaye nganye ikwavakalelwa ngendlela eyahlukileyo apho iTrex ithambe ngakumbi ukuhamba kuyo.
I-Azek ilula kuba ine-95% yeplastiki, kodwa iTrx iya kuziva ibanda kune-Azek xa iphantsi kwelanga. Ngapha koko, i-Azek inexesha elide lewaranti kodwa ixabisa ngaphezulu kwe-Trex decking.
Kwiindawo ezinobushushu obukhulu obutshintshayo iTrex decking ingabamba ngcono. Ngenxa yomxholo weplastiki kwi-Azek decking inokwandiswa kwaye ikhontrakthi kutshintsho lobushushu ngokubanzi.
Nangona kunjalo, i-Azek decking inokubamba ngcono kwimimandla ethambekele kufuma. I-trex kwelinye icala inamathuba amakhulu okwenza umswakama onokubangela ukungunda.
Ke, iyabilisela kweziphi izinto ozifunayo ekumgangatho ongaphandle. Ukuba ufuna ukhetho olunobungqongileyo ngakumbi olunokufikeleleka ngakumbi kwaye ubone ukutshintshwa kweedeksi zakho kule minyaka ingama-20 ukuya kwengama-30 izayo ayinakuphepheka, emva koko i-Trex lukhetho olufanelekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuhlala ixesha elide kwaye ucwangcise ukusebenzisa kwakhona kwaye uhambise indawo yakho yomgangatho kwixesha elizayo i-Azek lukhetho olukhulu.
Ukuba uyila eyakho ipaki kukho iinkqubo ezinokunceda. Jonga uluhlu lwethu lwezona zilungileyo isoftware yoyilo kweli phepha.
ngexabiso eliphantsi yonke iphakheji yokutshata
umsesane wokubandakanya idayimane omnyama nomhlophe
uyibopha njani iqhina lomoya ukuze uthinte iqhina
unxibe ntoni kumtshato wamaTshayina
Ngubani u-donald trump otshatileyo